गुल्मीमा अडियो आतंकको चार फायरः कति जायज कति नजायज ? | ebaglung.com
गुल्मीमा अडियो आतंकको चार फायरः कति जायज कति नजायज ?
२०७४ श्रावण ४, बुधबार १३:१६	Top News, अन्य समाचार, विविध 2203 पटक हेरिएको !
अडियो आतंकको पहिलो फायरः
गुल्मीको रुरु गाउँपालिकामा कांग्रेस माओवादीका संयुक्त गाउँपालिका प्रमुख उमेदवार यदु ज्ञवालीलाई हराउनका लागि एमाले समर्थकले मौन अवधी सुरु भए पछि पहिलो अडियो फायर खोलेका हुन् । त्यस अघि ज्ञवाली पक्षधरले गाई काट्ने काण्डलाई फेशवुकवाजी गरी रहेका थिए ।
मतगणना सकिएर मतगणना स्थलमा लैजाने वेलामा मदनाने गाउँपालिकामा एमाले नेत्री रामकुमारी झाँक्रिलाई मुछे कांग्रेस र माओवादीहरुले । एक पक्षिय रुपमा आएको त्यो समाचारले झाँक्रिलाई तनाव हुनु स्वभाविक थियो । कांग्रेसका कार्यकर्ता माथी झाँक्रिको नेतृत्वमा एमालेका कार्यकर्ताहरुले छुरा प्रहार गरेको समाचारका सम्वन्धमा झाँक्रिको प्रतिकृया समाचारदाताले मात्र हा्ेईन डेक्सले समेत माग्न खोज्दा टेलिफोन सम्पर्क नभएको बुझिएको छ । तर घानमा परे पुर्कोटदहका शिक्षक वोमबहादुर कुँवर र मानव स्वभाव न भैहाल्यो फोनमा नेतृ झाँक्रिको त्यो आक्रोष र शव्द आउनु स्वभाविक हो । जसलाई सामाजिक सञ्जालमा सार्वाजानिक गरेर झाँक्रिलाई बदनाम गराउने दुश्प्रयास गरियो । जुन घटनाले देश व्यापी चर्चामा रहे भेजबहादुर सर । गित पनि आयो डाँडै फुर्के सल्लो , भोज सरको गाउँ त चिने घर चिन्न सकिन वल्लो हो कि पल्लो ।।।।
रेसुङ्गा नगरपालिकामा कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलन गरेरै खोल्यो । जुन फायर एमालेका एक नेतालाई ध्वस्त पार्ने गरी खोलिएको थियो । किनकी चुनाव एमालेका ती उमेदवारको वलले जितेका थिएनन् त्यसको सारथी थिए तिनै नेता । झण्डै २५ वर्ष देखि कांग्रेसको किल्ला उनकै वलमा तोडिएको थियो । त्यस विरुद्ध सवै कांग्रेसजन एकै ठाउँमा भएर ब्रस्ट फायर खोले । त्यस आक्रमणको पर्दा पछाडी कमाण्ड कांग्रेस सचिव खिलध्वज पन्थीले गरेको पाईएको छ भने पर्दा वाहिर सभापति भुवनप्रसाद श्रेष्ठ देखिए । त्यस आक्रमणमा परेका ती एमाले नेता गणेश श्रीपाली सामन्य घाईते भए , दुई दिनको सामान्य उपचार पछि दुश्मन विरुद्ध पुनः हतियार उठान सक्ने भए ।
एमालेजनले कांग्रेसको आधा हिस्सा ध्वस्त पार्ने आधा हिस्सा बचाउने फौजी रणनितीका रुपमा फायर खोल्यो । त्यो आक्रमणबाट कांग्रेसका जिल्ला सचिव खिलध्वज पन्थी देखालो घाईते भए पनि त्यो भन्दा बढि घाईते उनका समर्थक बनेका छन् ।
कृपया मलाई त्यो पुरै अडियो उपलव्ध गराई दिनुस्ः पन्थी
यो फिचर लेख्ने बेला सम्म सचिव खिलध्वज पन्थीको घरमा चुलो बलेको छैन् । प्रेस विज्ञप्ती ल्याई दिन र त्यो पुरै अडियो खोज्न सहयोग गरी दिन पन्थीका सहयोगीहरुले आग्रह गरे पछि अहिले विहान म पन्थीको घरमा पुग्दा उनकी ९पन्थीकी० धर्म पत्नी डाको छाडेर रोईन् । दाजु मेरो श्रीमान त विरामी पर्दा पनि जुरुक्क उठेर पार्टी काममा खट्थ्यो , आज शत्रुले किन यस्तो आत्माघाती काम गरे ।। भन्दै डाको छाडेकी उनले पुरै अडियो खोजि दिन हात जोडिन् ।
कांग्रेस सचिव पन्थीले पनि हात जोडेरै पुरै अडियो खोजि दिन आग्रह गरे । उनले भने–‘ म विचलित भएको छैन तर मेरो परिवार र समस्त कांग्रेसजनमा आएको यो शोकलाई शक्तिमा वदल्न त्यो पुरै अडियो खोजि दिन म गुल्मीका सवै पत्रकारज्युहरुलाई विशेष आग्रह गर्दछु । ’
के छ त पुरै अडियोमा ?
पन्थीको भनाई अनुसार धेरै लामो घरयासी कुराकानी छ त्यस अडियोमा । काईली भाउजु उनि विरुद्धकी प्रमुख पात्र छिन् । दाजु भाई भन्नेहरु संग उनले मेरै सामु फोन गरे । भने–‘ हामीले एउटै दुधको लाम्टो चुसेका होईनौ र रु मैले पनि आमाको कृया गरेको होईन र रु यहि रगतको नाता रु एउटा भाईलाई ध्वस्त पार्ने राजनीति गरेर त्यो अडियो एमालेको कार्यालयमा बुझाउने रु ठिकै छ बुझाऔं तर पुरै हाल्न लगाऔ सामाजिक सञ्जालमा बल्ल म बाट आक्रोषित मेरा नेता र समस्त कांग्रेसजन संग म प्रस्तुत हुन सक्ने छु ।’
पन्थीले घरयासी कुराकानीमा भुवन दाई र शालिक दाईको विरोध आफ्ना ती परिवारमा भए पछि उनिहरुलाई थोरै शव्द तुच्छ शव्द बोल्नु परेको स्वीकार गरे । तर मेयरलाई छाडेर अरुमा भोट हाल जस्ता कुराहरु अडियोलाई काँटछाँट गरेर जोडिएको उनको दावी छ । प्रेमले सय भोटले हाँदैंछ… भन्ने बाक्यलाई प्रेमले शव्द त्यतै राखेर… ले हार्दैछ लाई काटेर उता लगिएको उनको दावी छ । उनले प्रेस विज्ञप्ती मार्फत यस घटनालाई विपक्षीद्धारा सिङ्गो पार्टी माथी भएको आक्रमण भन्दै विचलित नभई सत्य तथ्यको खोजीमा लाग्न समस्त कांग्रेसजनलाई आग्रह गरेका छन् ।
कोही बाँच्न सकिएला ?
आत्माघाती वम जस्तो गुल्मीको यो अडियो आतंकका विषयमा हामीले एउटा लेख प्रकाशित गरेका थियौं । कांग्रेसजनले फायर खोलेको दोश्रो दिन त्यो लेख आए पछि कांग्रेसजनको तथानाम गाली गलौज सहनु परेको थियो । किनकी एउटा सञ्चारकर्मीमा सुचनाहरु धेरै आई रहेका हुन्छन् । सम्भावित अर्को अडियो आतंक हुँदैछ भन्ने संकेतका रुपमा त्यो लेख आएको थियो ता कि कुनै पक्षको बचाउ गर्ने नियत थिएन । तर खुव गाली गरियो । तर जव एमालेको चौथो फायर पछि त्यो लेखलाई कांग्रेसजनले चुम्नु चुमे । नेपाल विद्यार्थी संघका साथीहरुले निकै पढ्नु भएको त्यो लेखलाई पछिल्लो चरण सहि विष्लेशण भनेर प्रतिकृया दिनु भएको छ ।
‘माओवादीको गोली भन्दा एमालेको अडियो असरदार’
चौथो यो अडियो आतंक पछि पाका काग्रेसजनले दश वर्षे माओवादी द्धन्द्ध र वहुदलिय ब्वयस्था संग विपक्षी कम्युनिष्टहरु एमाले र माओवादीलाई स्मरण र तुलना गर्न थालेका छन् । पाका काँग्रेसजन भन्छन्–‘वहुदलिय व्यवस्था ताका एमाले र कांग्रेसको टक्कर थियो र यस्तै खालका आत्माघाती आतंकहरु हुन्थे । श्रीमान श्रीमति विच , वावु आमा र छोरा छोरी विचको सम्वन्ध टुटाउने कृयाकलाप हुन्थे ।
मान्छेलाई बाख्रो बनाएर म्यायु.. म्यायु… वोल्न लगाउने र घाँस हाल्न लगाउने , कतै छुरा प्रहार गर्ने , कतै एक अर्काको मलामी नजाने , विपक्षीकोमा मोरो प(यो भने प्रतिपक्ष रमाउनले जस्ता कृयाकलाप हुन्थे । तर जव दश वर्षे जनयुद्ध भयो तव माओवादीको आतंकका सामु कांग्रेस एमाले एकै ठाउँमा उभिएको शक्ति बनेको हो । जव २०७० पछि को चुनाव यता माओवादीलाई यिनै दुई शक्तिहरुले साईजमा ल्याएर मतान्तरमा धेरै पछाडी पारे तव फेरी कांग्रेस र एमाले विच पुनः २०४६ को जस्तै एक अर्कामा आत्माघाती खेलहरु सुरु भएको संकेत यो अडियो आतंकले देखाएको छ ।
माओवादीले वरु युद्ध नै घोषणा गरेर केहि हाम्रा साथीहरुलाई मा¥यो , कुट्यो त्यसको दुखाई भन्दा एमालेजनको यो पछिल्लो् अडियो आक्रमणका्े असर बढि भएको छ । एमालेका ति नेता माथी लक्षित आक्रमण पनि निन्दनिय छ । पैसा बुझेको भनिएका व्यक्तिले नै कसैको करकावमा अडियो काण्डा सार्वाजानि गरिएको खुलासा गरी सकेका छन् । काग्रेसले होस वा एमालेले दुवैले गरेको यो यो अडियो आतंक निन्दनिय छ । अडियो आतंक नै गर्ने हो भने पार्टी रहने त कुरै न गरौं अव श्रीमान श्रीमति , वावु आमा , छोरा छोरी कोही रहने छैनन् ।
म मेरै उदाहरण दिन्छु । पत्रकारिता सिकाउने प्रयासमा लागेको र मेरै मिडियामा जागिरको व्यवस्था समेत मिलाई दिएको एक जना भाईले केहि दिन पछि म नभएको बेलामा अरु साथीहरु संग ‘कता गयो प्रेमे’ भने छन् । साथीहरुले त्यो सुनाए । असाध्धै पिडा भयो । उमेरमा पनि म उसको अंकल हुँ । तर मैले सोचें म भन्दा सिनियरलाई पनि त मैले व्यक्तिगत वसाई र वोलाईको क्रममा सम्मुखमा गरिने सम्मान गरेर बोल्दीन नि रु यहि सोचेर चित्त बुझाएँ अनि ति भाईलाई भने आईन्द यस्तो नबोल्नु है । यो सत्य घटना हो , मेरा अरु साथीहरुलाई पनि सोध्नु होला ।
कहिले काँही श्रीमतिले श्रीमानलाई कहाँ मरे छ र हा कुन्नी…, उतै उसको लास सेलाए पनि हुन्थ्यो भन्छन् । के अव त्यसलाई पनि रेकर्ड गरेर सुनाई दिने ? मानव स्वभाव हो , प्राय: कुनै नेता मन्त्री वा कुनै वेसारधारी धार्मिक व्यक्ति होस् प्रायः कोही अछुतो छैन । फोनमा आज बसौ न मैया भन्नेहरु धेरै हुनुहुन्छ । मैयाँहरुले पनि आज आईजा न मोर के को-या…. भन्नेहरु पनि छन् त्यो पनि रेकर्ड गरेर सुनाऔ त हालत के हुन्छ ? यसर्थ यो आतंक वन्द गर । अन्तिममाः नचाहिँदो फाईरिङ्ग ग-या, सवैलाई चेतना भया, ठुलो शिक्षा मिल्या .. कि नमिल्या ? वस ….. शत्रुले आगो लगाईदिएको घर निभाउने कि घ्यू थपेर खरानी पार्ने ? यो जिम्मा तपाईहरु घरधनी कै हो ………!
गुल्मी,२०७४ साउन ४ ।
खिलध्वज पन्थीको विज्ञप्ती:
आदर्श सञ्चार सहकारीद्वारा मृतक राहत रकम प्रदान
म्याग्दी धुलावाङमा श्रीमतीव्दारा कोदालोले प्रहार गरी श्रीमानको हत्या